Qarax ka dhacay xafiiska raysal wasaaraha Norway [Video] | Somaliska
War cusub: Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in 87 qof ay ku dhimatay weerarada lala beegsaday Norway, waxaa kale oo la soo bandhigay in nin caddaan ah oo cunsuriyiinta Norway xiriir la leh uu ka dambeeyay weerarada.
Qarax weyn ayaa ka dhacay irada xafiiska raysal wasaaraha Norway Jens Stoltenberg iyadoo ay ku dhinteen 2 qof dhowr kalena ay ku dhaawacantay halka xafiiska raysal wasaaraha iyo dhismayaasha wasaaradaha u dhow ay waxyeelo weyn soo gaartay.
Booliska ayaa xaqiijiay in qaraxa ay sababtay bambaano iyadoo dad goobjoogayaal ah ay sheegeen in baabuur uu ku gubanayo goobta qaraxu ka dhacay. Dadka Norway ayaa argagax ka muujiyay dhacdaadaan.
“Dadku aad ayay u yaabanyihiin. Aad ayaan u yaabanahay waana argagaxsanahay” ayay tiri mid ka mid ah dadka goobta qaraxu ka dhacay joogay. Wariyaasha ayaa sheegay in guud ahaan magaalada dhexe ee Oslo la xiray oo xaaladu ay tahay mid qasan.
Lama oga ilaa hada cida ka dambeysa qaraxaan. Norway ayaa isbuucii hore waxay eedeyn argagixiso ku soo oogeen nin lagu magacaabo Mullah Krekar oo hogaamiya urur ay leeyihiin Kurdiyiinta. Ninkaan ayaa u hanjabay in Norway ay ka shalaayi doonto dhimashadiisa.Lama sheegin in dhacdadaan iyo hanjabaada ninkaas ay xiriir leeyihiin.
War Cusub: Nin dharka booliska xiran ayaa 5 qof ku dhaawacay kulan dhalinyaro ka tirsan xisbiga talada haya ay ku yeelanayeen jaziirada Utoya ee Norway
War cusub: Booliska ayaa sheegay in 7 qof ay ku dhimatay qaraxyada iyo rasaasta. Wararka ayaa sheegaya in booliska ay qabteen ninka weerarka ka geystay jaziirada.
16 jir Soomaali ah oo kufsaday gabadh 9 jir ah
July 23, 2011 at 23:16
WAR DADKII MAXA HELAY AYAGUNA MA ARGA GAXEN ILAHADA WAX FIGRAD AH LAMASOQORIN KKKKKKKKKKKKKKKKKK ALA FULAYSNA SOMALIDU WXAY KABAQAYAN IN AYAGA LOO MALEYO KKKKKKKKKKKK WAR FULAYNIMADA ISKADA OO ISKU KALSONADA WAXA XUNA KA DHII DHIYA OO DIDA
asc waxaan u malaynayaa ninkaan wuxuu is lahaa lagu ogaan maayo . kaddibna waxaa loo qabsani dhibaatadaan iyo xasuuqaan uu gaystay muslimiinta . oo la dhihi waa argagixiso waxa ay u yaqaannaan . laakiin ma dhicin oo waxa uu ku fikiraayay waxaa ka soo hor martay tii alle oo wuu ku fashilmay . alaah baa mahad iska leh